Njem Nleta | Hongli
Ngwunye Mbido Mmanụ Ala
Companylọ ọrụ anyị na-elebara anya ọ bụghị naanị mbọ nke ndị ọrụ kamakwa ahụike nke anụ ahụ na nke uche. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ anyị ga-ahazi nzukọ egwuregwu iji kwe ka ndị ọrụ na-emega ahụ. N'afọ gara aga, ndị ọrụ niile na-ekere òkè na egwuregwu ahụ. N’oge asọmpi egwuregwu, anyị edobela ọtụtụ ihe egwuregwu. E wezụga ịgba ọsọ 4 * 50, enwerekwa ụdị agha, 100m ọsọ na-agba ọsọ 100m na ​​ajụjụ gbasara egwuregwu.
Ewezuga egwuregwu ezumike, ụlọ ọrụ anyị ga-ahazi ndị njem otu. N'afọ gara aga, anyị gara ZHOUSHAN ọnụ. N'ime ndị otu anyị, enwere ndị ọrụ iri abụọ na isii na-ekere òkè maka njem nlegharị anya. Anyị buru ụzọ banye ụgbọ ala na-aga zhoushan. O were ihe dị ka awa anọ iji rute ebe ahụ. N'ihe dị ka elekere 1, anyị weere nri ehihie ahụ. Mgbe nri ehihie ahụ, anyị bidoro ịrị ugwu ahụ ma gaa ilere ebe ahụ. Mgbe ihe dị ka awa abụọ gachara, anyị rutere n’elu ugwu ahụ. Na mgbe ahụ, anyị were foto. Izu ike ruo ihe dị ka ọkara awa, anyị laghachi azụ.
Mgbe ahụ, anyị gawara mpaghara ebe nkiri Wu Wu Tang. N’ebe a, anyị hụrụ ọtụtụ okwute na ojii. Anyị na-ejikwa ụgbọ mmiri na-eleta ọdọ mmiri ahụ.
N'abalị, anyị nwere oge iji mee ihe omume n'efu. Anyị gara n’oké osimiri ma gwuo egwuregwu. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ họọrọ ịga ahịa abalị. Banyere ndị ọrụ na-aga n'oké osimiri, ha na-egwu ájá ma na-anwa ijide nshịkọ ahụ.
N’echi ya, anyị gara ugwu Putuo. Anyị na-eleta nkume nnọchi anya dịka nkume dị ka obi. Ebe kachasị dị mkpa bụ ụlọ nsọ na achara.
Mgbe anyị letachara, anyị laghachiri Hangzhou. Lee nnukwu njem ọ bụ.
Oge nzipu ozi: Jun-18-2020
Enweghị Han Han 10, Linpu Town, Xiaoshan district, Hangzhou
Ọkacha amara ndị ọrụ mkpesa ndị…
Nwee obi ụtọ na weebụsaịtị ọhụrụ Han ...
Upsates na-akwụghị ụgwọ